တရုတ်ထုတ်လုပ်သူ မှစ. အမြင့် Precision မှိုထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းကိုဆက်ကပ်, ပလတ်စတစ် Injection ကိုမှို, Precision Injection ကိုမှို
Ruizhun Precision Metal Co., Ltd. [Guangdong,China] လုပ်ငန်းအမျိုးအစား:Manufacturer အဓိကစျေးကွက်များ: Americas , Asia , East Europe , Europe , North Europe , West Europe ထုတ်ကုန်:41% - 50% Cert:ISO/TS16949, ISO14001, ISO9001 ဖေါ်ပြချက်:မြင့်မားသော Precision မှိုထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း,ပလပ်စတစ် Injection ကိုမှို,Precision Injection ကိုမှို,တိကျမှိုအစိတ်အပိုင်းများ,,
Home > ထုတ်ကုန်များ > မှိုထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း > မြင့်မားသော Precision မှိုထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း
မြင့်မားသော Precision မှိုထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း
မြင့်မားသော Precision မှိုထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း ၏ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကျနော်တို့တရုတ်, မြင့်မားသော Precision မှိုထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း, ပလပ်စတစ် Injection ကိုမှို ပေးသွင်း / စက်ရုံထဲကနေအထူးပြုထုတ်လုပ်သူ, Precision Injection ကိုမှို R & D နှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏လက္ကားအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များဖြစ်ကြသည်, ငါတို့သည်စုံလင်သောရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုရှိသည်။ သင့်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျှော်ကြည့်ပါ
အဆိုပါဆေးထိုးတန်ဆာအခြေခံချမ်းပြေးသမားအပြောင်းအလဲနဲ့နည်းလမ်းကိုအသုံးပြုပါ။ ချမ်းပြေးသမား၏အားသာချက်ကသုံးစွဲဖို့လွယ်ကူသည်, ထိုသို့ကိုလည်းကောင်းစွာအချို့ဗေဒလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုငျသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ ချမ်းပြေးသမားမြင်နိုင်ဖဲကြိုးအကျိုးသက်ရောက်မှုအချို့အစိတ်အပိုင်းများအတွက်ဆေးထိုးရှောင်ရှားရန်,...
မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်အစိတ်အပိုင်းများမှိုကုန်ထုတ်လုပ်မှု, မောင်းသူမဲ့လေယာဉ် shell ကိုသေးငယ်တဲ့မှိုကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏မှိုကုန်ထုတ်လုပ်မှု, မှတ်စုစာအုပ်, အိမ်သူအိမ်သားကရိယာ, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်အခြားမြင့်မားသောဝယ်လိုအားဆက်စပ်ပစ္စည်းမှိုကုန်ထုတ်လုပ်မှုအပါအဝင်ပေါ့ပါးဆက်စပ်ပစ္စည်းမှို။ မောင်းသူမဲ့ဝေဟင်မော်တော်ယာဉ်...
တရုတ်နိုင်ငံ မြင့်မားသော Precision မှိုထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း ပေးသွင်း
Precision Injection ကိုမှိုများအတွက်သင့်တော်မြင့်မားတဲ့ Precision မှိုထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း, လုပ်ငန်းစဉ်:
1. ပစ္စည်းပြင်ဆင်မှု: ကွဲပြားခြားနားသောထုတ်ကုန်များအတွက်လိုအပ်သည့်ကွဲပြားခြားနားသောမှိုပစ္စည်းများလက်ျာမှိုပစ္စည်းရွေးချယ်ဖို့ထုတ်ကုန်များ၏ဝိသေသလက္ခဏာများသည်နှင့်အညီ, တွင်လည်းကွဲပြားခြားနားပါသည်။
2. ကြမ်းတမ်း: ပစ္စည်းရွေးချယ်ခြင်းပြီးနောက်, ကြိတ်စက်လေယာဉ်များနှင့်ဘက်မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာပဏာမအပြောင်းအလဲနဲ့ဖျော်ဖြေဖို့အသုံးပြုသည်။
3. Fine အပြောင်းအလဲနဲ့: ဒါဟာစက်မှလေယာဉ်နှင့်စတုရန်းထောင့်တစ်ဦး grinder သုံးစွဲဖို့လိုအပ်ပေသည်။
4. Dash: မြေပြင်ခဲ့နဲ့ထုစာရေးစားပွဲပေါ်တွင်လုပ်ငန်းများ၌နှင့်ထားရှိခံရပြီးနောက်ညာဘက်ထောင့်မှမြင့်ခဲ့ရာဌာနမှိုပန်းကန်။ , ထိုမှိုသည်နှင့်အညီတစ်ဦးပုံဆွဲ Make တစ်ဦးအုပ်ချုပ်အမြင့်မင်းနှင့်အတူကျမ်းပြုဆရာနှင့်နောက်ဆုံးတွင်မှိုပန်းကန်ပေါ်မှာတွေက dotted line ကိုလုပ်ရမည်။ တူးဖော်ခြင်း, နှိပ်။
5. အပူကုသမှု: အပူမြင့်မားတဲ့အပူချိန်သတ်ပြီးနောက်ပန်းကန်၏ခိုင်မာသောတိုးတက်လာဖို့လာမယ့် template ကိုနှင့်မော်ကျူး၏ကုသမှု, ဒေါသ, သတ်, annealing သည်နောက်ထပ်ပြီးထဲမှာ, ပန်းကန်လေယာဉ်ကြိတ်နှင့်ညာဘက်ထောင့်ကစား, ပြီးတော့ဝါယာကြိုးဖြတ်တောက်ခြင်း။
6. ရုံးတင်စစ်ဆေးမှိုစည်းဝေး: အမှို frame ကို select လုပ်ပါသို့မဟုတ်လမ်းညွှန်ကော်လံ supporting နှင့်မှိုစည်းဝေးပွဲကိုပြီးမြောက်ရန်လက်ကိုလမ်းညွှန်နှင့်နေမှုကိုချေဖျက် Debugging ဖို့စာနယ်ဇင်းစက်ပေါ်တွင်စုဝေးမှိုကိုထည့်သွင်းခြင်း, နောက်ဆုံးတော့၏လိုအပ်ချက်များကိုတွေ့ဆုံရှိမရှိအတည်ပြုပေးဖို့ outrush တိုင်းတာ ထုတ်ကုန်။ တစ်ခုလုံးကိုစိုင်းဖြစ်စဉ်ကို။
high-တိကျနေမှုကိုချေဖျက်၏လယ်ပြင်တွင်မြင့်မားသောနည်းပညာဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ထုတ်ကုန်အစုလိုက်အပြုံလိုက်ထုတ်လုပ်မှုများအတွက်အလယ်အလတ်စီးပွားရေးထုတ်လုပ်မှုစကေးရောက်ရှိဖို့ကဲ့သို့သောတဲ့အခါမှာလြှပျစစျနှငျ့အိမျပစ္စည်းထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီများအမြိုးမြိုး, ဒဏ်ငွေအပေါ်ယံအခွံကိုနည်းပညာ၏ဒဏ်ငွေလျှောက်လွှာကောင်းသောနည်းပညာနှင့်လုပ်ငန်းခွင်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုအောင်မြင်ရန်နိုင်ပါတယ်။ နည်းပညာနေမှုကိုချေဖျက် high-speed ကိုတိကျစွာထိုကဲ့သို့သောစက်ယန္တရား, လျှပ်စစ်ပစ္စည်း, ပစ္စည်းများ, မှန်ဘီလူး, ကွန်ပျူတာများ, တိကျစွာထောက်လှမ်း, သတင်းအချက်အလက်ကွန်ယက်များ, နှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုနည်းပညာအဖြစ်အများအပြားလယ်ကွင်းပါဝငျသညျ။ ဒါဟာ multidisciplinary စနစ်ကအင်ဂျင်နီယာဖြစ်ပါတယ်။